Layma's World: June 2008
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဒီဇိုင်းလှူမည်
ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့နေ့လည် ၂ နာရီ Myanmar Info-techမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Launching ceremony of " Project SHELTER" အခမ်းအနားတွင် တွေ့ ကြုံ ကြားသိခဲ့ရသည်များကို မျှဝေပါမည် ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာများ အသင်း မှ ဦးဆောင် ၍ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသောဒေသများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီရန် ရည်ရွယ်၍် Project SHELTER ကော်မတီ ကို ဖွဲ့ စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် ..။
အရံသင့် အ်ိမ်ပုံစံ ၅ မျိုး ဆွဲထားပါတယ်..။
ပုံစံတစ်မျိုးစီအတွက် ဗိသုကာ ပုံစံများ ၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပုံများ ၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားစာရင်းများ ၊ ပစ္စည်းအရေအတွက် စာရင်းများ ပါဝင်ပါမည် ။ လိုအပ်ပါက ဆောက်လုပ်မည့် ကန်ထရိုက်များ ရှာဖွေ ရွေးချယ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းတွင် လည်း ကူညီပါမည် ။
ဒီဇိုင်း အလှူခံမည့်သူများဘက်မှ လိုအပ်ချက်များ
၁။ ဖောင် ဖြည့်စွက်ရန် ( နမူနာ)အမည် ( သို့ ) အဖွဲ့အစည်း
မည်သည့်နေရာတွင် ဆောက်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်သည်
ကုန်ကျစရိတ်ခန့် မှန်းချက် မည်မျှတတ်နိုင်သည်
မည်သည့်ပုံစံကို ရွေးချယ်မည် ..
၂။ အိမ်ဒီဇိုင်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်မပြု ပါ။
(လှူဒါန်းရေးဆွဲသည့် ဗိသုကာ၏ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တော့ ပြင်နိုင်မယ် လို့လေးမ ယူဆပါတယ် )
၃။ အိမ်ဒီဇိုင်းများကို လွှဲပြောင်းကူးယူခွင့်မပြုပါ ။
၄။ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများ၏ ခရီးစရိတ် ၊ စားစရိတ် နှင့် ရုံးစရိတ်များကို အလှူရှင်မှ ကျခံရန် ။
၅။ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးပါက Project SHELTER သို့ ပြန်လည်သတင်းပို့ရန်နှင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ပါကလည်း သတင်းပြန်ပို့ ရန် ။
( ခုလို အချက် ငါးချက် သတ်မှတ်ထားရခြင်းသည် အလကားပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေဆိုပြီး ပေါပေါလောလော မဖြစ်စေရန် နှင့် ဗိသုကာပညာရပ် ကိုတန်ဖိုးထားစေရန် ရည်ရွယ်တယ်လို့လေးမ ထင်ပါတယ် )
လက်ရှိ ဒီဇိုင်း ၅ မျိုးသည်
၁။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအိမ်များမဟုတ်ပါ ။
သို့ သော် structure ( frame) ကို အခိုင်အခံ့ဖြစ်အောင် စီမံထားသောကြောင့် ရာသီဥတု ဒဏ် ( ဆိုးရွားပြင်းထန်မှုမရှိလျှင် )ကို ခံနိုင်သည် ။
၂။ လတ်တလော နေနိုင်မည့် တန်ဖိုးနည်း အိမ်များဖြစ်သည်။
၃။ ရွာသားများအနေဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင် ဆောက်လုပ်နိုင်သော ဒီဇိုင်းများ ဖြစ်သည် ။
စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ မိသားစု ၀င်ငွေ တိုးပွားလာလို့ဖြစ်စေ … အခြားအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ … ပုံစံမပျက် ထပ်မံ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နိုင်သော ဒီဇိုင်းများဖြစ်ပါသည် ။
၁။ ဦးဆန်းဦး (၉၅၁) ၃၈၀၂၅၆
၂။ ဦးဇော်မိုးရွှေ ( ၉၅၁) ၆၆၀ ၉၉၆
၃။ ဦးစည်သူမြင့်ဆွေ ( ၉၅၁)၆၅၂ ၃၈၆
၄။ မဟေမာန်ကြည် (၉၅၁) ၇၂၃ ၁၀၄
website: www.myanmarchitects.org ( လေးမ ဖွင့််တာတော့ ဖွင့်လို့ မရဘူး ) :(
ဥာဏ်ပြေးတဲ့ မနုစံက http://www.myanmararchitects.org/
လိပ်စာနဲ့ရသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ … မ ။
Posted by lay-ma at 7:59 PM7comments Links to this post
မိုးစက် ရှိုက်သံ ...
ငါ ချစ်တဲ့ ကောင်းကင်ကြီး …
မျက်ရည်တွေကြားက မြင်လိုက်တယ် …
နိုးတ၀က် အိပ်မက်ထဲမှာလေ …
ငါဟာ တိမ်လေးအဖြစ်နဲ့ ပေါ့
ခဏ နေတော့ ငွေ့ ရည်ဖွဲ့ သွားတယ် …
ရွာချလိုက်တော့ မိုးစက်တွေ အဖြစ်နဲ့…
အချစ်တွေ ဂူသွင်းခံရတယ် … တဲ့…။
၀န်ခံချက် ။ ။ ဒီမှာ ကိုရန်အောင် ရေးပေးသွားတဲ့ မှတ်ချက်လေးက စာသားတွေကို ယူသုံးပါသည် ...။
Posted by lay-ma at 2:38 AM 16 comments Links to this post
ဘလော့ဂ်တော်တော်များများမှာ ... သိကြတဲ့ အတိုင်း ဆီပုံးလို့ခေါ်ကြတဲ့ cbox လေးတွေ ထားတတ်ကြတယ် …။ အဲဒီမှာ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းရေးချင်ရင် … မာကြောင်း သာကြောင်း … ဘာကြောင်း ညာကြောင်း လေး ရေးချင်ရင် … လည်သွားတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ရင် … ဘလော့ဂ်လင့်ခ်လေး ပေးချင်ရင် … နုတ်ဆက်ချင်ရင် … အဲလို… ရေးချင်တာလေးတွေ .. ရေးဖို့ထားထားကြတယ်…။ လာလည်တဲ့ သူတွေကလည်း ရေးချင်စိတ်ရှိတာလေးတွေ ရေးရေးသွားကြတယ်…။ အဲတော့ တိုတိုပြောရရင် ရေးသွားကြသည်ပေါ့ …။
ဟိုးတလောတုန်းက ညစ်ညမ်းဗီဒီယို ဖိုင်တွေ ..ပုံတွေ တင်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ် တစ်ခုဟာ ဘလော့တော်တော်များများရဲ့ ဆီပုံးတွေ မှာ " လာလည်ပါတယ်ခင်ည " ဆိုပြီး လိုက်နုတ်ဆက်ပါတယ် …။ လေးမ ဆီပုံးမှာလည်း လာနုတ်ဆက်ပါတယ် …။ လေးမလည်း ကိုယ့်ဆီ လာလည်တဲ့ သူဆီ ပြန်သွားလည်ဦးမယ် ဆိုပြီး ပေးထားတဲ့ လင့် အတိုင်း ချီတက်သွားပါတယ် …။ ရောက်လည်းရောက်ရော ညစ်ညမ်း ဘလော့မှန်း သိတာနဲ့လှည့်ပြန်မယ်လုပ်ရင်း စပ်စုတတ်တဲ့ မျက်စိက ဆီပုံးကို ရောက်သွားပါတယ်…။ အဲဒီမှာ လေးမ မျက်လုံးပြူးသွားပါတယ် …။ ဆီပုံးမှာ လေးမ နဲ့သိတဲ့ ညီမလေး တစ်ယောက်က နာမည်နဲ့ တကွ " လာလည်သွားပါတယ်ရှင် " လို့…လင့်ခ်လေးနဲ့ တကွ … နုတ်ဆက်ထားတာတွေ့ ရပါတယ် ။ အဲဒီ ညီမလေး လုပ်ကြံခံရတာလား … မျက်စိမှိတ်ပြီး နုတ်ဆက်မိတာလား …လို့ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်ရပါတယ် ရှင် … ။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ ဖိုင်ဆိုဒ်တွေ လေးပြီး loading နေတဲ့ အချိန်ကို မစောင့်ဘဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး နုတ်ဆက်မိသွားတယ် လို့ထင်ပါတယ်ရှင် …။
နောက်တနေရာမှတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ချီးကျူးမိသူလေးကိုတွေ့ လိုက်ရပါတယ် …။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဘလော့ဂ်ဂါကောင်လေးတစ်ယောက် တင်ထားတဲ့ ပို့ စ်လေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်လေး သိပ်တော်တာပဲ လို့ရေးသွားတာပါ …။ မနေနိုင်တဲ့ စာဖတ်သူတစ်ဦးက "ခေါင်းစဉ်ပဲဖတ်သလား … ကောင်လေးရေးတာမှ မဟုတ်ဘဲ " လို့ဝင်ပြောသွားပါတယ် …။ အဲဒီပို့စ်လေးကို ကောင်လေးက ရေးသူနာမည်နဲ့ တကွ တင်ပေးထားတာပါ …။ လေးမကတော့ အဲဒီ အချိန်မှာ ဖြစ်သွားမယ့် ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ကြည့်နေမိပါတယ်…( ငို၍ ရယ် ၍ မရသောမျက်နှာ ဆိုတာ ဒါမျိုးလားလို့ ..) ။ ကောင်မလေး မျက်စိမှိတ်ပြီး နုတ်ဆက်မိလေသလား …။
လေးမ ခဏခဏ လွဲတတ်ပါတယ် …။ တနေ့ကပဲ မင်းကျန်စစ်ကို "ကျန်စစ်ရေ … အသက်ရှိသေးလား " လို့ဆီပုံးမှာ သွားအော်ပါတယ် …။ နောက်မှ ဆီပုံးက စာတွေ သေချာလိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ ကျန်စစ်က လေးမ မရေးခင် ၁ ရက်လောက်ကပဲ ဆီပုံးရှေ့ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်ပြီး စာမေးပွဲ ဖြေနေတဲ့ အကြောင်း သူ့ ဘော်ဒါတွေကို အသိပေးထားတဲ့ စာတွေ့ ရပါတယ် … ။ အရှက်ပြေ " ခိုးမချနဲ့ နော် " လို့နောက်တစ်ကြောင်း ထပ်ရေးခဲ့ပါတယ် …။
မှတ်ချက် ။ ။ ကာယကံရှင် မမ/ ညီမလေးတွေ စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် ...။
Posted by lay-ma at 6:43 AM 22 comments Links to this post
Labels: Analysis, That's what I wanna say
"ငါ့ရည်းစားက … သူ့ ရည်းစား ဖြစ်နေတယ် " လို့ သာ ဘလော့ဂ်မှာ တင်လိုက်ပါ …။
Posted by lay-ma at 5:57 AM 28 comments Links to this post
တတိယနှစ်ကျောင်းသူ ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စပေးတဲ့ project က Sun Shelter.
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတက် … ကျောင်းဆင်း … စာသင်ချိန် အကူးအပြောင်း … တစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင် အကူးအပြောင်းမှာ ခေတ္တ နားခိုစရာ နေရောင် ဒဏ် ကာကွယ်ပေးတဲ့ sun shelter ကို design လုပ်ပါတဲ့ …။
အဲဒီတုန်းက shelter ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အဲဒီလိုပဲ နားလည်လိုက်တယ်…
ဒီထက်ပိုပြီး များများစားစား မသိချင်ခဲ့ဘူး …။
ခုတလော shelter ဆိုတဲ့ အသံတွေ မိုးမွှန်အောင် ကြားနေရတော့မှ shelter အကြောင်း နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီိး ပြန်စဉ်းစားမိတယ်…။
Shelter ဆိုတာ နားခိုရာ … ခိုလှုံရာ … နေထိုင်ရာ …။
လူသားတွေရဲ့ မရှိမဖြစ် အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေထဲမှာ နေစရာ လည်းပါတယ် …။ အစားအစာ နဲ့ အ၀တ်လိုပဲ ခိုလှုံစရာနေရာ ကလည်း အရေးတကြီး လိုအပ်ပါတယ်…။
သဘာဝတရားကြီးကတော့ ကျောက်ဂူတွေ … အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်ပင်တွေ ကို shelter အဖြစ် ကမ္ဘာဦးကတည်းက ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးသားပါ …။ သဘာဝ shelter တွေမှာ အားနည်းချက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ အတွက် အသိဥာဏ်မြင့်မားတဲ့ လူသားတွေဟာ man-made shelter တွေကို ဖန်တီးလာကြတယ်..။
အစပထမကတော့ ရာသီဥတုဒဏ် ကာကွယ်ဖို့ … သားရဲတိရစ္ဆာန် ဘေး ကင်းဝေးစေဖို့ ….
နောက်တော့ … နောက်တော့ … လူသားတွေရဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့ လိုလားချက်တွေ နဲ့ အတူ shelter ဟာ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့modified လုပ်ခံခဲ့ရတာ ဒီနေ့အထိပါပဲ …။
အိပ်ရုံပဲ ဆိုတဲ့ အဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ … အစားစားဖို့… ချက်ပြုတ်ဖို့ … စတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကို ပြီးပြည့်စုံစေတဲ့ space (နေရာ) တွေ ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ အခါ အိမ်လို့ ခေါ်တဲ့ နေစရာ ဖြစ်လာတယ်…။
လူတွေနေကြတာချင်းတူပေမယ့် အိမ်တွေက မတူကြပြန်ဘူး…။ အလွယ်တကူတွေးရင် အကြိုက်ချင်း မတူလို့ပေါ့ လို့ ထင်စရာ အကြောင်း ရှိပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ ဒီထက်ကြီးကျယ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိနေပါတယ်…။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒေသမတူရင် … ရာသီဥတုမတူရင် … လူတွေရဲ့ နေထိုင်စားသောက်တဲ့ အကျင့်စရိုက်မတူရင် … ဒေသတွင်း အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ မတူရင် ပုံစံတွေ တူလို့မရပါဘူး…။ ဥပမာဆိုရရင် အပူပိုင်းဒေသမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အအေးပိုင်းဒေသကလို မှန်လုံအိမ်တွေ ဆောက်ရင် နေရတာ အဆင်မပြေပါဘူး…။ ငါးပိရည်ကျို … ငါးခြောက်ဖုတ် … တညင်းသီးပြုတ် … ငရုတ်သီး ထောင်းတဲ့ မြန်မာ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် အနောက်တိုင်း မီးဖိုချောင် ကျဉ်းကျဉ်းဟာ စိတ် ကျဉ်းကြပ်စေပါတယ်… ( အိမ်ရှင်မ တော်တော်များများ စတိုင်လ်သစ်နဲ့ready-made တွေ အသုံးများလာတဲ့ အတွက် ဒီကိစ္စက သိပ်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါတော့ပါဘူး…)
ဒုတိယကတော့ shelter ကို လိုအပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းခြင်း မတူရင် shelter တွေ မတူတတ်ပါဘူး …။ ဥပမာပေးရရင် သာမာန် လူတစ်ယောက်က security နဲ့privacy အနည်းငယ် ရှိတဲ့ shelter မှာ နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး … ရန်သူတွေ လာတိုက်ခိုက်မှာကို စိုးရွ့ံ နေရတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးကတော့ ရဲတိုက်အကြီးကြီးဆောက်ပြီး နေမှာဖြစ်ပါတယ်…။
တတိယ အချက်ကတော့ ငွေကြေး ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ပုံစံကွဲလွဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
လူတွေဟာ တတ်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး တဲအိမ် … တိုက်အိမ် … ၂ ထပ်အိမ် … လုံးချင်း… တိုက်ခန်း … စတဲ့ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့shelter တွေမှာ နေထိုင်ကြတယ်…။ တချို့ လူတွေကတော့ အသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့ shelterလိုအပ်တာလား…. shelter ကောင်းကောင်းနဲ့ နေနိုင်ဖို့ အသက်ရှင် ရုန်းကန်နေရတာလားဆိ်ုတာ ဒွိဟ ဖြစ်နေကြပါတယ်…။
ဘယ်လို ကြောင့် ဘာတွေကွဲလွဲနေပါစေ … shelter ဆိုတာ အကာအကွယ် တစ်မျိုးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်…။
ဒါကြောင့် အသင့်အတင့် ကာကွယ်မှု … လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့ shelter ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်..။ ရာသီဥတုဒဏ် … အင်းဆက် ပိုးမွှား အကောင်ပလောင် ဒဏ်တွေကို အတော်အသင့် ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရပါမယ်…။
Shelter ရဲ့ဦးလှည့်ဘက် ကို သင့်တော်အောင်ရွေးချယ်တာမျိုး … အပေါက်တွေ ဖောက်တဲ့ အခါမှာ ဖြစ်သင့်တဲ့ နေရာ ကို ရွေးချယ်ဖောက်တာမျိုး …. shelter ကို မြေကြီးမှ အနည်းငယ် မြှင့်ဆောက်တာမျိုး … တွေက ကုန်ကျစရိတ် သိပ်မပိုတဲ့ ကာကွယ်နည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်…။
shelter မရှိတာနဲ့စာရင် ရှိနေတာက သိပ်ကောင်းပါတယ်…။
shelter ရှိနေတာထက် အသင့်အတင့် စိတ်ချရတဲ့ shelter ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်…။
အသင့်အတင့် စိတ်ချရတဲ့ shelter ထက် အန္တရာယ်တော်တော်များများကို ( မမြင်ရတဲ့ rays တွေကိုပါ ) အစွမ်းကုန် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ shelter ဖြစ်ရင် အလွန် ကောင်းပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် ဘေးအန္တရာယ် တွေကို ကာကွယ်ရင်း … ဖယ်ခွာရင်းနဲ့ နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ သဘာဝရဲ့ လက်ဆောင်တွေနဲ့ကင်းကွာလာပြီး မီးခြစ်ဆံဗူးထဲက မီးခြစ်ဆံလေးတွေလို … လှောင်အိမ်ထဲက သတ္တ၀ါလေး တွေလို ဖြစ်မသွားဖို့တော့ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ ဗိသုကာက တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ် … ။ ။
Posted by lay-ma at 5:51 AM 10 comments Links to this post
Labels: Architecture, Seasonal Post
ဒီနေ့ကျောက်စာ လက်စသတ်တယ်…။ ကျုပ်တစ်သက်မှာ …. ကျောက်ထွင်းပညာနဲံ့အသက်မွေးခဲ့တဲ့ ကာလ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဒီနေ့လောက် ဂုဏ်ယူပီတိဖြစ်ရတဲ့နေ့ မျိုး မရှိခဲ့ဖူးဘူး…။ ဒီနေ့ဟာ ကျုပ်ဘ၀မှာ ပီတိအဖြစ်ရဆုံး … ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး … နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီ …။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သမိုင်းဝင်မယ့် ရွှေစည်းခုံ ကျောက်စာကို ရက်ပေါင်းများစွာ ထွင်းထုနေခဲ့ရာက အချောသတ်လိုက်နိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်နေလို့ပဲ…။
ကျုပ်ထွင်းခဲ့ရတဲ့ စာသားတွေကို တစိမ့်စိမ့် ပြန်မြင်ယောင်နေမိတယ်ဗျာ…။
“ ချစ်သူအပေါင်းမှ ကွဲကွာကုန်သော သူတို့၏ မျက်ရည်များကို အကျိုးစီးပွား ထွက်မြောက်ခြင်းဖြင့် လက်နှင့်တူသော မေတ္တာစိတ်ဖြင့် သုတ်ပေးလိမ့်မည် ..။
ချစ်သူအပေါင်းမှ ကွဲကွာ စိတ်နှလုံးပူဆွေး ( ၀ါ ) စိတ်ရောဂါဖြစ် နှလုံးမသာယာကုန်သော သူတို့၏ နှပ်ရည်တို့ကို အကျိုးစီးပွား ထွက်မြောက်ခြင်းဖြင့် ရေနှင့်တူသော ကရုဏာစိတ်ဖြင့် ဆေးကြောပစ်လိမ့်မည်…။ ”
ပြန်တွေးမိရုံနဲ့ တောင် မျက်ရည်လည်မိပါရဲ့ …။ ကျုပ်တ်ို့ရဲ့ မင်းကြီး …ကျန်စစ်မင်းကြီးရဲ့ စေတနာ …ပြည်သူအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာဗျာ …။ ဒါကို မြှောက်ပင့်ရေးထိုးထားတဲ့ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ပါလို့ ခင်ဗျားတို့ ပြောချင်သလား …။ မင်းကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ ဘယ်ပုဂံသူ ပုဂံသားမှ အဲသလို အတွန့်တက်မှာ မဟုတ်ဘူးဗျ … ။ ဘုရင်မို့လို့ကြောက်လို့ မပြောရဲတာမဟုတ်ဘူး … ကျန်စစ်မင်းကြီးလက်ထက်မှာ ဘယ်နိုင်ငံကို စစ်မက်ပြုပြီး… ဘယ်နိုင်ငံကတော့ စစ်လာပြုတယ်လို့…. စစ်ပွဲ အကြီးအကျယ်ဖြစ်လို့ …. ပြည်သူတွေ ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတာမျိုး ကျုပ်မကြားဖူးဘူး…။
“လက်ယာလက်ဖြင့် ပြည်သူတို့အား ထမင်းမုန့် ပေး၍ လက်ဝဲလက်ဖြင့် လူအပေါင်းတို့အား ပစ္စည်း ဥစ္စာအ၀တ်ပုဆိုးများ ပေးကမ်းလိမ့်မည် …။ သို့လျှင် ပြည်သူအပေါင်းတို့သည် အမိရင်ခွင် နေရသော သားငယ်ပမာ ချမ်းသာသုခနှင့်ပြည့်ဝကြ …….”
ဒါပဲ…ကျောက်စာတစ်ခုလုံးရဲ့ အသက်က အဲဒီစာကြောင်းပဲ … မင်းကြီးမှာ ရှိတဲ့ လက်နှစ်ဘက်ဟာ ပြည်သူတွေ အတွက်ပါ ဆိုတာကို အတိအလင်း ကြေငြာ လိုက်တာ … ပြည်သူကို ဘယ်လို စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့သဘောထားကို ကျောက်ထက်အက္ခရာ တင်လိုက်တာ …။ ထမင်းပေးမယ် … အ၀တ်ပေးမယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ တင်စားပြောတာပေါ့ … လူတိုင်းတော့ အလကား ဘယ်ကျွေးထားနိုင်ပါ့မလဲ …။ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေအောင် … အလုပ်ကောင်းအောင်ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ ပြောတာနဲ့ အတူတူပဲမဟုတ်လား…။ နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားကြည့်ရင်လဲ ပေးမယ် ဆိုတာ မလုဘူး လို့ယူဆလို့လည်း ရသကိုး…။
ကျောက်စာတစ်ခုလုံးကို မြတ်စွာဘုရားက ဗျာဒ်ိတ်တော် ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးထိုးထားတာ … သဘောကတော့ဗျာ ကျန်စစ်မင်းကြီးဟာ သာမညမင်း မဟုတ်ဘူး… မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့မင်း လို့ ဆိုလိုသပေါ့ …။ တကယ် ဗျာဒိတ်တော်ပေးမပေးတော့ ကျုပ်လို ကျောက်ထွင်းသမားက ဘယ်အတတ်ပြောနိုင်မလဲဗျာ … မင်းကြီး ရေးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို မြတ်စွာဘုရားက ရှင်အာနန္ဒာကို မိန့်ကြားခဲ့လေဟန် ရေးထိုးတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ …။ အဲလိုဆိုလည်း အပြစ်မဆိုသာပါဘူးဗျာ … ။ ကျန်စစ်မင်းလည်း… လူပဲလေ… လူဆိုတာ အတ္တရှိမှာပေါ့ … လူမှ …ရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူး… လူ…မင်း… လူတွေရဲ့ မင်း … မင်းဆိုတော့ အတ္တ ပိုရှိမှာပေါ့ …။
ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့ဘယ်သူမိန့် တဲ့ စာသားပဲ ဖြစ်ဖြစ် … ပြည်သူတွေ ဘက်ကို အတော်လေး ထောင့်စုံအောင် စဉ်းစားရေးထိုးထားတာကတော့ တော်တော်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ် …။ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျင့်သီလ … စားဝတ်နေရေး … အစစအရာရာ …ကလေးသူငယ်ကစလို့ … အမယ်အိုအထိ … ရသေ့ရဟန်း..စစ်သည် … တောင်သူဦးကြီး … အိုးစလောင်းရောင်းတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ အမယ်အိုတောင် မကျန်စေရအောင် ဂရုတစိုက် ရေးထိုးထားတာ…။
“ မှို၊ မျှစ် ၊ ပန်း၊သစ်သီးဝလံ အပေါင်း အလွန်ပေါလိမ့်မည် ။ လက်သည်းဖြင့် မုန့်စားသင်သောကလေးငယ်များသည် လူကြီးကဲ့သို့ စိတ်ကောင်းထားကြလိမ့်မည်…. ။”
“ အိုးစလောင်းရောင်းသော ဆင်းရဲသည့် အမယ်အိုများသည် ဈေးကောင်းရ ကြွယ်ဝစေရမည်… ”
“ မင်း၏ နှုတ်မှ တရားနှင့်ညီသော အမိန့် များသာထွက်လိမ့်မည် …”
ကျောက်စာမှာ ရေးထိုးတဲ့ စာသားတွေအရဆိုရင် ကျုပ်တို့ရဲ့မင်းကြီး… ကျန်စစ်မင်းကြီးဟာ အလွန် ကြည်ညို ထိုက်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ် တစ်ပါးလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်တယ်…။ အပြင်မှာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအရလည်း မင်းကောင်းတစ်ပါးဆိုတာ ငြင်းလို့မရဘူး…။
နန်းတက်ခဲ့တဲ့ ပုံစံကိုပဲကြည့် …။ ပုဂံမှာသာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က တိုင်းပြည်တွေမှာ ဘုရင်ဆိုတဲ့ အာဏာကြောင့် အဖေကိုသားကသတ် … အစ်ကိုကို ညီကသတ်နဲ့ … နန်းလုပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကျန်စစ်မင်းကတော့ အရှင်မဲ့နေတဲ့ ပလ္လင်ကို မမက်မောဘဲ ဘုရင် စောလူးကို ရန်သူ့လက်က ကယ်ထုတ်ပြီး နန်းအပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်…။
တိုင်းတပါးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးတွေ လမ်းဖွင့်ပေးတယ် ….တိုင်းပြည် သာယာအောင် အားထုတ်တယ် …။ တိုင်းသူပြည်သားတွေ စီးပွားဖြစ်လိုက်ကြတာလည်း မုဆိုးမတောင် ဘုရားတည်နိုင်တယ်ဗျာ …။ ဘုရားစေတီတွေတည်လိုက်တာလည်း မနည်းမနောဘဲ … တည်သမျှ ဘုရားမှာလည်း မာန်မာန ဟန်လွှမ်းမိုးတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူမှ မပါဘူး …။ ပညာရှင်ကိုလေးစားပြီး အနုပညာကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ဟန်တွေပဲပါတယ်…။
ရှေ့ ဘုရင် ( အနော်ရတာဘုရင် ) ကို ဘယ်လောက်အလေးထားသလဲဆိုတာ ဒီရွှေစည်းခုံ ဘုရားကို ပြီးအောင် သေချာဆက်တည်တာကို ကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်…။ ဒီလို မင်းမြတ်တစ်ပါးရဲ့ သမိုင်းတွင်မယ့် ကျောက်စာ ( ရွှေစည်းခုံ ကျောက်စာ ) ရေးထွင်းရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် သိပ်ကျေနပ်မိတယ်…။ ။
၀န်ခံချက် ။ ။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ ရေးသားပြုစုသော “ ရွှေစည်းခုံ မွန် ကျောက်စာ ” ကို ကိုးကား ပါသည်။
Posted by lay-ma at 4:52 AM 15 comments Links to this post
Labels: Thinking from History
လေးမ လိပ်စာက အသစ်ကလေးနော်…။
နောက်ဆို iblogger ဒုက္ခပေးတာမခံရတော့ဘူး…။
Posted by lay-ma at 2:01 AM 8 comments Links to this post
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဒီဇို...